PhotoGrid: Video & Pic Collage Maker, Photo Editor 7.23 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.23 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာ PhotoGrid: Video & Pic Collage Maker, Photo Editor
PhotoGrid: Video & Pic Collage Maker, Photo Editor ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
နေရာလေးကိုဗီဒီယို & ဓာတ်ပုံမှ Collage, ဗီဒီယို & ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်မှု, စလိုက်ရှိုးနဲ့အခြားပျော်စရာ features တွေ! အလုံးစုံတို့အဘို့အလုံအလောက်အစွမ်းထက်တစ်ခုမှာ! grid ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမှတ်ဥာဏ်!
-VIDEO: သင်၏ edited ဗီဒီယိုနှင့်အတူဂီတပေါင်းမည်။ , ရွေးချယ်ဖို့ 700+ ဖောစာသား & အီမိုဂျီထည့်ပါ။ သီးနှံဗီဒီယိုနှင့်က splice ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးကနှေးပြကွက်ကိုဗီဒီယိုအယ်ဒီတာ! စိစစ်မှုများနှင့်အခြားအကူးအပြောင်းသက်ရောက်မှုဦးကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်!
သင့်ရဲ့ Instagram ကိုပုံပြင်, Facebook, Twitter သို့မဟုတ် Whatsapp အပေါ် -Make & ရှယ်ယာ .. !
1. စတစ်ကာ Eraser ကိုနဲ့ search function ကိုယခုရရှိနိုင်ပါ!
3. သင့်ရဲ့ meme အတွက်ရယ်စရာ Gif Added
သင်၏ဖုန်းသိုလှောင်မှုတက်လွတ်မြောက်ဖို့ 4. Clear ကို cache ကိုဖိုင်တွေ!
အရောင်ဆံပင်ငျလိုခငျြဆိုလမ်း - 6. သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆံပင်ဆိုးဆေး!
တစ်ဦးကဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်များနှင့် Instagram ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အခမဲ့ video collage & ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ app ကိုမဖြစ်မနေ-ရှိသည်! ဒါဟာ meme, GIF, ထုတ်လုပ်သူ, ဗီဒီယို collage, pic ကို collage, စာတိုပေစ, ကင်မရာသက်ရောက်မှု, Instagram ကိုများအတွက် instasize, သီးနှံ, AR မျက်နှာ filter များ, စတစ်ကာများ, ဓာတ်ပုံကို clipping, နောက်ခံ, တင်းပလိတ်များ, ဖောင့်, ဆလိုက်ရှိုး, မှုန်ဝါး, retouch, ပုံစံများတူသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူထုပ်ပိုးရဲ့ ဤမျှလောက်ပိုပြီး!
အကောင်းဆုံး Instagram ကိုဗီဒီယိုအယ်ဒီတာနှင့်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ, ဖြတ်တောက်မှုအပိုင်းသို့မဟုတ်ရေစာမပါနှင့်အတူမှုန်ဝါးနောက်ခံ add! ဂီတနှင့် Instagram ကိုများအတွက်ဗီဒီယိုများပေါ်ရှိအခြားဆိုးကျိုးများထည့်ပါ။ ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူဗီဒီယိုများချုံ့။ collage ထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူတစ်ဦးကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓါတ်ပုံကိုအယ်ဒီတာ
🚀ဓာတ်ပုံမှ Collage: 500+ ကွဲပြားခြားနားသော collage တင်းပလိတ်များ
သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီမှတင်းပလိတ်များစိတ်ကြိုက်နိုငျပါသညျ! သင့်ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံကိုဖန်ဆင်းခြင်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲ! ရုပ်ရှင်ပွဲတော် strips တွေနှင့်အေးမြဓာတ်ပုံကိုချုပ်လှပသော Make! သင်တို့သည်လည်းလွတ်ပါ pic ချုပ်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စာတိုပေစ personalize နိုငျပါသညျ! မင်္ဂလာဖြတ်ညှပ်ကပ်
1. သီးနှံ, လည်ပတ်, ဆိုဒ်ပြောင်းရန်မှုန်ဝါးနဲ့အလွယ်တကူသင်၏ဓါတ်ပုံများင့်တယ်, သင်ပင် Instagram ကိုရဲ့ 1 မှာသင့်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဘောင်နိုင်ပါတယ်: 1 အချိုး!
2. စတစ်ကာများ, စာသားများ, နောက်ခံ, ရေးခွ, ပဋ္ဋိပက္ခများနှင့် pixels Add, သို့မဟုတ်သင့်ဓါတ်ပုံကိုဖွင့်တောက်ပဆန့်ကျင်ဘက်, ရွှဲနှင့် layout ကို adjust!
💖Smartမျက်နှာ Filter ကို / ကင်မရာ: ရီးရဲလ်အချိန် Selfie ကင်မရာ & ဗီဒီယိုအသံဖမ်း
သာမန်ဓါတ်ပုံ 100+ ကာတွန်း filter ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူစိတ်ကူးကိုကြည့်ပါစေ။ သငျသညျမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူ, ဒါမှမဟုတ်အဲဒီမှာသို့သော်များစွာသောလူတို့နှင့်အတူ, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်နေကြသည်နေပဲဖြစ်ဖြစ်, WowCam (AR အလှအပမျက်နှာ filter ကို) ကိုထိန်းသိမ်းနှင့်သင့်အံ့သြဖွယ်အချိန်လေးမှမှော် add ပါလိမ့်မယ်။
💎အခြားလူကြိုက်များ editing tools
1. Edit ကို: သီးနှံ & အချိုး, adjust, စာသား, မှုန်ဝါး, ဘောင်, ပိုစတာ, twinkle, mosaic, layout ကို, ရေးခွ, Filmstrip, ချက်ချင်းရှယ်ယာဗီးနပ်စ် filter ကိုနှင့်စာရင်းအပေါ်တတ်၏။
2. စတစ်ကာများ: 500+ စတစ်ကာများနှင့်ချစ်စရာရုပ်ပြောင်နှင့်သင်၏ဓါတ်ပုံကို collage မိမိစိတ်ကြိုက်။
3. စိစစ်မှုများ: retro, ရှုခင်း, အိမ်ဖွဲ့, မီးနဲ့လှပတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုများအတွက်ပွဲလမ်းသဘင် filter များအမျိုးမျိုးအပါအဝင် 200+ လက်ရာမြောက်သော filter များ။
4. နောက်ခံသမိုင်းနောက်ခံ 200+ မျိုးပေါင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Instagram ကို💖Follow: photogrid
သငျသညျ #photogrid နှင့်သင်၏ post ကို share လျှင်, သင်၏ဓါတ်ပုံကိုငါတို့အားဖြင့်ရာထူးတိုးခံရဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်!
PhotoGrid နေဖြင့်တောင်းဆိုထားသော permissions
◎အံ့သြဖွယ်ဓါတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုဖန်တီးရန် PhotoGrid သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်ဓာတ်ပုံများ, မီဒီယာ, နှင့် files တွေကို access ရန် "သိုလှောင်" ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
◎သင့်ရဲ့အဖိုးတန်အချိန်လေးကိုဖမ်းယူနိုင်ရန်, PhotoGrid ပုံနဲ့စံချိန်ဗီဒီယိုများယူရန် "ကင်မရာ" ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
◎သင့်ရဲ့ဗီဒီယိုများအထူးစေရန်, PhotoGrid အသံမှတ်တမ်းတင်ရန် "မိုက်ခရိုဖုန်း" ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
TOS သီးသန့်လုံခြုံရေး http: //www.cmcm.com/protocol/site/tos.html
ပေါ်လစီ http: //www.cmcm.com/protocol/site/privacy.html
ကြော်ငြာရွေးချယ်မှု http: //www.cmcm.com/protocol/site/ad-choice.html
# Filmmaker # ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ # စတစ်ကာသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို # တည်းဖြတ်မှုများကို #Slide Show ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို # ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို # Youtube ကိုဗီဒီယိုအယ်ဒီတာ #Free app ကို #Free ဂီတ #memory #instagram
PhotoGrid: Video & Pic Collage Maker, Photo Editor အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
PhotoGrid: Video & Pic Collage Maker, Photo Editor အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
PhotoGrid: Video & Pic Collage Maker, Photo Editor အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
PhotoGrid: Video & Pic Collage Maker, Photo Editor အား အခ်က္ျပပါ
PhotoGrid: Video & Pic Collage Maker, Photo Editor ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း PhotoGrid: Video & Pic Collage Maker, Photo Editor အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.23
လက်မှတ် SHA1: F7:DA:70:40:18:E9:4C:15:88:39:9A:8C:11:B1:02:40:AB:07:81:02
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Jack Ping
အဖွဲ့အစည်း (O): RoidApp
PhotoGrid: Video & Pic Collage Maker, Photo Editor APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ